Maxaad Winter in Tareenku ku Socda Italy waa waajib | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Maxaad Winter in Tareenku ku Socda Italy waa waajib
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 29/01/2020)
Tareenadu waa sida ugu fiican ee ay u safraan dalka Talyaaniga iyadoo aan loo eegin xilli. Si kastaba ha ahaatee, iyagu xaqiijin in uu noqdo ammaan iyo doorasho raaxo badan, gaar ahaan inta lagu jiro xilliga qaboobaha. Winter safarka tareenka ee Italy ammaan ma aha oo kaliya, laakiin waxa ay sidoo kale degdeg ah oo hufan.
The khadadka tareenada-xawaaraha sare sida Trenitalia baxsad midigta dhexe ee Italy. Trenitalia waxaa lagu magacaabaa Frecciarossa, Frecciargento or Frecciabianca depending on the line. Trains link practically every town or city in Italy, aad qaadato xarunta of caga kasta. The joogsato ugu muhiimsan yihiin Salerno - Napoli (Naples) - Roma (Rome) - Florence (Florence) - Bologna - Milan (Milan) - Torino (Turin). Rome in Venice waa siman a 3 saac iyo 45 daqiiqo oo safar halka a turaanturoon ka Florence Rooma waa Diintooda a 1 saacad iyo 32 daqiiqo.
Sababtoo ah ee xawaaraha iyo raaxadeeda waxa fure u ah Winter in Tareenku ku Socda Italy, waxaad booqan kartaa oo dhan ee dalka ku meelaha sare si dhakhso ah oo si raaxo leh. Halkan waxa ku jira shan magaalo top ay u safraan tareen ee Italy jiilaalka.
1. Naples – waa Our furitaanka waayo Winter in Tareenku ku Socda Italy
Naples waa fiican ee kuwa doonaya in ay ka fog qabow ka heli. Mar walba waa ay qoraxdu ee Naples! Marka ay timaado in xaflado Christmas, Naples iftiimay kor ku xusan oo dhan magaalooyinka kale ee Italy. Waxay leeyihiin goobaha dhalashadaadii Christmas in aad neefta qaadi doono. Waxaad iyaga ku dhammuna waxay wada arki doonaan magaalada u taliya. Dad badan oo ku heshiin doonaa in mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan waa at Via San Gregorio Armeno.
Rome si Tuscany waa wadada ugu sareysa Winter in Tareenku ku Socda Italy sababtoo ah waa gaaban iyo saacad iyo badh ah tareen kortaan iska. Waxaad bilaabi kartaa maalin ee caasimada Italy ee ku riyaaqayaa fasaxa iibka iyo booqashada ah matxafyada Vatican. by qadada, aad bood karin tareenka iyo in ka yar laba saacadood, naftaada ka heli picturesque Tuscany. qaado maquufin in kaamerada ah halkay biyo ah si ay cap off aad maalin.
Haddii aad ka heli Gaariisa jiilaalka neceb qabow cimilada; ka dibna tababar u safreysa Palermo. Sicily waa baxsado qabow waqooyiga Europe sida ay bixisaa jawi in uu dareensan yahay u dhaw xagaaga ama guga. Waxaad sidoo kale ku caawin karin, laakiin dhici jacayl la suuqyada Christmas magaalada, Muuqaallo ku dhalatay, iyo Dr Makumbe soo jiidashada.
Madaxa kor u waqooyiga magaalada Turin haddii hargab skiing cararaan waa fikrad oo xiiso leh jiilaalka aad. Turin waa Winter in Tareenku ku Socda Italy albaabka Alps. Ha seegin Luci d'Artista. Waa farshaxanka casriga ah ee sanadlaha ah soo bandhigid in nalalka magaalada la rakibo iftiin cajiib ah.
Winter in Venice macnaheedu waa nadiif ah, hawada tegayo oo dadkii badnaa ka yar si ay idin ka shuqlinin quruxdiisa ka. Ku raaxayso kortaan gondola ama kafeega kabasho at square ah. Waxaa had iyo jeer macquul ah ee Baraf iftiin si aad waayo-aragnimo Venice ka sii sixir.
Sidee in laga iibiyo Tikidhada Winter in Tareenku ku Socda Italy
Gadashada tigidhada ka hor dhigaya nolosha ka dhib yar. Waayo, tareenada long-distance sida Frecciarossa, Frecciargento, frecciabianca, reserved seating is mandatory.
Gadashada tigidh in qofka saldhiga had iyo jeer waa ikhtiyaar. Si kastaba ha ahaatee, loo diyaar garoobo safaf dhaadheer iyo dhib iyo qiimaha sare. In maanta iyo da ', waxa uu noqday caadi ahayn loo hayo iyagoo aad kuraasta tareen online. Marka ay timaado in sida ilaa hadda ka hor aad ka iibsan kartaa tigidhada aad, jawaabta waxay ku xiran tahay nooca tareen Talyaani.
tareenada Frecce waa tareenada-xawaaraha sare baxsad in inta u dhaxaysa magaalooyinka waaweyn ee Italy ee. Waxaad awoodi kartaa tigidhada aad iibsato sida ugu sida afar bilood ka hor taariikhda safarkaaga. Recently, Trenitalia ku dhawaaqday in ay kordhin lahaa ay kaabiga jaale inay 6 bilood ka hor.
Ballansan kuraasta aad ka hor, iyo xataa aad ku raaxaysan doonaa qaar ka mid ah ka-dhimis weyn. Waxaa fiican in laga iibiyo Tikidhada haddii aad hubto oo timir ah safarka sida laga dhimay iyo tigidhada ka hor sida caadiga ah waa non-isbedel iyo non-celin. La xiriir Save A tareenka waayo, wax su'aalo ah oo ku saabsan safarka tareenka jiilaalka ee Italy.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit leh link si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-train-travel-italy%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys talooyin trainjourney Tranride tareenada caarada tababarka talooyin tareenka tareen safarka Talooyin safarka tareenka safarka tareenka safarka travelitaly